sundara devi sandesh music award 2017
‘सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्ड’मा शम्भुजित, कुवेर र चन्द्रमणिलाई सम्मानित गरिने
काठमाडौा, २०७४ श्रावण २५ बुधबार । सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्डमा वरिष्ठ सङ्गीतकार शम्भुजित बास्कोटालाई लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिने भएको छ । बास्कोटालाई गीतसंगीतको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएबापत दीर्घ सेवा सम्मान प्रदान गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै यो अवार्डमा चन्ऽमणि गौतम र कुवेर गिरीलाई पनि सम्मान गरिने भएको छ । तेस्रो सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्ड २०७४मा लोकसञ्चारकर्मी सम्मान चन्द्रमणि गौतम र रङ्ग पत्रकारिता सम्मान कुवेर गिरीलाई गरिने भएको हो । आगामी साउन २७ गते धादिङको ओम शान्ति चलचित्र मन्दिरमा पााच उत्कृष्टबाट सर्वोत्कृष्ट छानिने सुन्दरादेवी सन्देश म्युजिक अवार्डमा उनीहरुलाई सम्मानित गर्न लागिएको हो ।
आधुनिक र लोकदोहारी विधामा हुने उक्त अवार्डमा २१ विद्यामा अवार्ड प्रदान गरिने आयोजक समितिका सदस्य सचिव मनोज थापाले बताए । अवार्डको निर्णायकमा संयोजक वरिष्ठ रङ्ग पत्रकार तथा गीतकार शान्तिप्रिय, सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठ र राष्ट्रिय लोकदोहारी गीत प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष तथा सर्जक चन्ऽ शर्मा रहेका छन् । कार्यक्रमको व्यवस्थापन रेस्पोन्सिभ मिडिया प्रा. लि. काठमाडौंले गर्ने भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य सहयोगी संस्था धादिङ उद्योग वाणिज्य माहासघं रहेको छ ।
उत्कृष्ट ५ नोमिनेशनमा निम्न रहेका छन्:–
१, योजना पुरी – मत बस्नै नसक्ने २, इरा न्यौपाने –चित्त मेरो ३, शोभा पाण्डे – मेरो चरित्रमा शंका गर्ने तिमिको ४, एन्जिला रेग्मी – क पुरी क ५, सहिमा श्रेष्ठ – तिमी बोल ।
१, कृष्णहरि बराल – मेरो चरित्रमा शंका गर्ने तिमिको २, पुरुषोत्तम बस्नेत – पैसाकै लागि बाच्छ मान्छे ३, भगिरथ दाहाल – म रुदा ४, लालकुमार बराल – कोही कोहीको माया ५, किरण नेपाली – तिमीलाई रोजेको ।
१, सुरेन्द्र श्रेष्ठ – म रुदा २, रिमेश कुमार थापा – दुई दिनलाई मुटु ३, सुनिल मास्के – डाडै छोए फुल ४, दिपक शर्मा – मन पर्छ मलाई ५, गैरे सुरेश – मेरो चरित्रमा शंका गर्ने तिमी को ।
१, बुनु उप्रेती – टुट्यो टुट्यो २, प्रतिक्षा भण्डारी – भाउ खोज्ने ३, लक्ष्मी तामाङ – उडि जाने ।
१, वि पाण्डे – निष्टुरीले मान्दै मानिन २, सोनाम पाख्रिन – म रुदा ३, मनोज विष्ट – भमरा ४, नविन गुरुङ – उडी जाने ५, नारायण ढकाल – हजार चोट ।
१, प्रविण श्रेष्ठ – म रुदा २, दिपक विष्ट – कोही कोहीको माया ३, माधव बेल्वासे – मृत्यु पछि ४, टेकेन्द्र शाह – आजपनि ५, निशान घिमिरे – तिम्रै पिरले ।
सर्वोत्कृष्ट भिडियो छायाकार
१, मौसम गुरुङ –तिमी फुल हौ कालि २, कृष्ण रैले– आज गाउामा ३, विरही कार्की –आमा ४, पशुपति शर्मा– प्लेनमा सरर ५, मेक्सम खाती– मायाले माया लुकायो ।
१, मिना लामा – झम्के सााझमा २, उमा श्रेष्ठ – बरको छायाा ३, मञ्जु गौतम – हेलम्बुको स्याउा ४, भुमिका गिरी – सातो पुत्लो गयो ५, सम्झना लामिछाने मगर – मायाले माया लुकायो ।
१, टिका तारामीमगर – गुन्द्रुकलाई पकाउनु पर्दैन २, बसन्ती थापा – लालु पाते ३, वर्षा सिलवाल – ज्यान पर्‍यो चिटिकै ।
१, प्रविण भट्ट – आज गाउामा २, नविनघर्ति मगर– केटी पट्याउन ३, पवन सिंखडा– बाच्छु मर्दिन ४, सुजन शाही –तिम्रै सम्झनामा ५, दिपक विष्ट – एक चोटी भेट्न पाए ।
१, करण चैसिर – बाच्छु मर्दिन २, राजेश घिमिरे – तिम्रै सम्झनामा ३, सुरेश श्रेष्ठ – एक चोटी भेट्न ४, हरिनारायण चौधरी – मायाले माया ५, दुर्गा पौडेल – आज गाउामा